Zụta ihe eji egwu Spotify - SoNuker
Kedu uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụrụ Spotify Plays?
Na-eme ka ntụkwasị obi dịkwuo egwu na egwu gị
Ọ na - enyere aka ịbawanye ọkwa abụ
Ikwesighi ige egwu egwu ndi ozo
Na-agba ndị mmadụ ume ka Na-enwe Mmasị, Gwuo & Kọwaa na egwu gị
Nsonaazụ na-amalite n'ime awa 24
Kedu ihe kpatara m ga-eji zụta ihe egwuregwu Spotify?
Egwuregwu ndị a na-adabere na profaịlụ gị bụ otu n'ime ihe mbụ ndị ọbịa na profaịlụ gị na-ele. O nwere ike ime ka ha kpebie ozugbo ozugbo ebe ahụ ige egwu gị. Mgbe ị zụrụ Spotify eji egwuri egwu si a reputable na-eweta dị ka anyị ọ na-enye gị Spotify asọmpi onu ọ chọrọ ka gị egwu nụrụ site ọtụtụ ndị mmadụ, na-enyere aka na-ewu gị fanbase.
Ọrụ anyị dị 100% nchekwa iji. N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-enye ọrụ anyị anaghị arịọ ma ọ bụ chọọ paswọọdụ Social Media gị. Ya mere, anyị anaghị achịkwa akaụntụ gị ma ọ bụ na-agwa ya ka ọ mee ihe ọ bụla ọ na-ekwesịghị ime. Ọrụ anyị na-enye na-anwale ọtụtụ oge ma na-aga n'ihu na-emelite ma gbanwee site na ngwa ngwa mgbasa ozi mmekọrịta iji hụ na ọ kachasị mma na nsonaazụ kacha mma. SoNuker.com nọ na-enye ọrụ kacha mma na ọgbara ọhụrụ na Social Media Marketing n'ịntanetị.
E tinyela Spotify Plays na ụgbọ ibu gị.
Ndị na-eso 100 ($ 20) Ndị na-eso 250 ($ 35) Ndị na-eso 500 ($ 60) Ndị na-eso 1000 ($ 100) Ndị na-eso 2500 ($ 180) Ndị na-eso 5000 ($ 300) Ndị na-eso 10000 ($ 500)